daacadda RMC Oo Ogaatay Waqtiga Uu Neymar Junior Dhameystirayo Ku Biiritaanka Paris Saint Germain & Heshiiska Uu Saxiixay | Wakaaladda Wararka Hiilnews
daacadda RMC Oo Ogaatay Waqtiga Uu Neymar Junior Dhameystirayo Ku Biiritaanka Paris Saint Germain & Heshiiska Uu Saxiixay
Radio Montecarlo oo xiganeysa ilo ku dhaw ciyaariyahanka reer Brazil ayaa shaaca ka qaaday in xidigaan uu heshiis shaqsi ah la gaaray Paris Saint Germain isla markaana uu ka warsugi doono heshiiska dhexmara labada kooxood bartamaha isbuucaan.
Neymar Jr wuxuu dhameystiri doonaa heshiiska uu ugu biirayo PSG maalinta talaadada ee soo aadan waxaana sidaas warineysa idaacadda Radio Montecarlo ee dalka faransiiska laga leeyahay taasoo sidoo kale qirtay in xidigaan uu saxiixay heshiis shan sano oo sanadkii uu qaadan doono 30 Malyan oo Euro ka hor canshuurta.
“Heshiiska waa la isla meel dhigay, xogo fiican ayaana ilaa iyo hadda la isla gartay” ayey ilaha ku dhaw Neymar Junior u sheegeen RMC.
Sidoo kale Radio Montecarlo wuxuu qiray in Isniinta ama talaada la sugi doono in labada kooxood ay isla meel dhigaan, waxaana laga fahmi karaa sida uu u doonayo inuu kaga tago Barcelona sidii uu ula dhaqmay Nelson Semedo.
Dhanka kale idaacadda waxey soo ogaatay in xeerka dhaqaale wanaagga UEFA uusan dhib ku noqon doonin Paris Saint Germain isla markaana ay sameyn karto saxiixa ceynkaan oo kale ah madama aysan afar sano ku xad gudbin xeerkaas.
Madaxa Shati siinta kooxaha iyo xeerka dhaqaale wanagga Andrea Traverso ayaa sharaxay isagoo la hadlayay La Gazzetta dello Sport: “Hadii kooxi soo iibsato ciyaartoy, waxaa la fahansan yahay in si hormaris ah u dhameysti doonto dhamaan xisaabaadka looga baahan yahay, hadii aysan sidaas sameynin, waxey la kulmi doonaan ganaax, balse kama hor istaagi karno kooxaha iney ciyaartoy soo iibsadaan”